Radio Don Bosco - SDB Maneran-tany
Naseho ny : 2 febroary 2022
Nosoratan'i NJAKATIANA Tafitasoa Fabien
Naseho ny : 2 septambra 2021
Amerika : Sekoly Salezianina momba ny fifandraisan’ny mpiara-belona
Nosoratan'i Ramamonjisoa Miora Clément Julio
Nanomboka tamin’ny 26 Aogositra 2021 lasa teo ny fiofanana tao amin’ny sekoly iray izay tantanan’ny Salezianina ao Amerika. Sekoly mampiofana ny olona eo amin’ny lafin’ny fifandraisan’ny mpiara-belona. Miisa 83 ireo mpandray anjara ao anatin’izany sampam-piofanana momban’ny serasera izany, ary avy any amin’ny provinsy efatra ambin’ny folo mampiasa ny fiteny espaniôla.
DBGYFF 2021 : Fifaninanana horonan-tsarimihetsika
Nosoratan'i Ranaivomanantsoa Harilanto
Naseho ny : 20 aogositra 2021
Ny Fikambanana Salezianin'i Don Bosco dia mampanao fifaninanana ho an'ny tanora maneran-tany, manan-talenta amin'ny fanatontosana horonan-tsarimihetsika. "Don Bosco Global Youth Film Festival" (DBGYFF) no anaran'ny fifaninanana, ary amin'ity taona ity dia mifototra amin'ny lohahevitra hoe "Onenan'ny fanantenana".
Pejy 1 amin'ny 2